I-DIY Dtg Yokuthenga I-Bag Printer eshibhile China Manufacturer
Incazelo:Umshini wokunyathelisa we-Shopping Bag,Impahla Yokuthenga Imishini Yokuthenga Bag,I-Diy Dtg Bag Bag Yokuthenga
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinta ye-Bag > I-DIY Dtg Yokuthenga I-Bag Printer eshibhile
Kuyincoma ukukhiqiza ukushicilela kwesikrini kanye nezimboni zokudlulisa ukushisa njengoba zingasetshenziswa ngezindlela eziningi, ezingabizi futhi zihlukile ekunyatheliseni kwendabuko. Samukela uhlelo lwedijithali, ukuskena okucacile kwe-infrared, inzwa yezinhlangothi eziningi kanye nezingxenye ezicacile eziphezulu, ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwephrinta kunemibono ezinzile futhi ecacile! SineMishini Yokunyathelisa Ibhasi Yokuthenga kanye Nezinguqulo ezintsha. Izinguqulo zethu ezintsha zonke zengeza i-infrared ray. E ukuthutha izingubo zokugqoka; i-design ephelele ye-ink system kanye ne-nozzle idivayisi yokuhlunga, ukuqinisekisa ukuqhubeka kokukhiqizwa kanye nekhwalithi yokuphrinta. Impahla Yokuthenga Imishini Yokuthenga Bag inokuncintisana kakhulu, samukela i-OEM
Ukusetshenziswa kwe- Diy Dtg Bag Bag Printer :
Umshini wokunyathelisa we-Shopping Bag Impahla Yokuthenga Imishini Yokuthenga Bag I-Diy Dtg Bag Bag Yokuthenga Umshini wokunyathelisa we-Foam Umshini wokunyathelisa we-Digital Umshini wokunyathelisa wekhofi odlayo Umshini wokunyathelisa we-Digital UV Umshini wokunyathelisa we-T we-T